ကိုယ်ဝန်ကို အပြင်ကနေရအောင် လုပ်ပေးနည်း (၂) မျိုး ( IUI and IUTPI )
သက်ကြီးရွယ်အိုတို့တွင်ဖြစ်တတ်သည့် မက်ကူလာအားနည်းခြင်း (Age-Related Macular Degeneration)
လရိပ်မေ လူအများစုဟာ ဆံပင်ကျွတ်တဲ့ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဆံပင် ၅၀-၁၀၀ ကျွတ်တာက ပုံမှန်ပဲဆိုပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ သူတွေမှာ ဆံပင်ပိုကျွတ်တတ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ ယုံကြည်မှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြက်သွန်နီကို သုံးပြီး ဆံပင်သားသန်စွမ်းအောင်...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပို့စ်ကြောင့် ဘ၀ပြောင်းစေမည့် ခွဲစိတ်စရိတ်ရရှိခဲ့သည့် အိန္ဒိယကလေးငယ်
မိုးမင်းထွန်း ရှားပါးတဲ့မျက်လုံးကင်ဆာခံစားနေရတဲ့ အန်နီးအာရာရဲ့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးမှာ ဘူးသီးလုံးလောက်ရှိတဲ့ အကျိတ်ဖုကြီးတစ်လုံး ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီခြောက်နှစ်အရွယ်ကလေးရဲ့ မိသားစုကစတာလင်ပေါင် ၁၀၀၀ ကျော်ကုန်ကျမယ့်ကုသစရိတ်ကို မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လူမှုရေးကွန်ယက်ပေါ်မှာ သူ့ဓာတ်ပုံကိုတင်ပေးတဲ့ စေတနာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဘာဂီရွာမှကလေးငယ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလှူငွေ အမြောက်အများကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် အန်နီးရဲ့ပုံကိုတင်ပေးတဲ့ ဂါဗင်ဒါဆင်းချာဒါက – “...
မိုးနတ်မင်းကြီးကို ကြောက်တယ် . . .(၁)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဒီနေ့လူနာတွေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှူရာ အိပ်ရာထဲလဲနေတာ သုံးလလောက်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ လူနာ ဒေါ်ရှုကြည်ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒေါ်ရှုကြည်ဟာ လေဖြတ်ထားတာသုံးလကြာပါပြီ။ ပြန်ပြီး သတိရပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မထနိုင်၊ မစားနိုင်သေးပါဘူး။ အစာမျိုတဲ့အခါ မကြာခဏသီးတတ်လို့ နှာခေါင်းကနေ အစာပိုက်နဲ့...
ဘာကြောင့် ကိုလက်စထရော မြင့်မားရတာလဲ
သွေးထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော မြင့်မားရတာက အောက်ပါအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်လို့ ဆင်ခြင်စေလိုပါတယ်။ – ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fat) စားသုံးမှုများ လွန်းတာ၊ – ကိုယ်အလေးချိန် မြင့်မားတာ၊ – ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မရှိတာ၊ – အသက် ၂၀အရွယ်မှာ...
ခြေသလုံး သွေးကြောထုံးဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည့် နေထိုင်နည်းများ
စူး (ဆေးဝါးတက္ကလိုလ် ) (၁) သွေးလှည့်ပတ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ကြိုးစားပါ ခြေသလုံးအပါအ၀င် တစ်ကိုယ်လုံး သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်တာကြောင့် သွေးပြန်ကြောထုံးတာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာ၊ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ဆောင်တာ၊ အနားယူချိန်မှာ ခြေထောက်ကို မြှင့်ထားတာစတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးရင်...
အမျိုးသမီးတွေ အသားမစားဘဲ နေတဲ့အခါ ဘယ်လို ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရလာနိုင်သလဲ
မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အသားမစားဘဲနေပြီး သက်သတ်လွတ်စားတဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှု ပုံစံအတိုင်း လိုက်နာတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးက ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ် ဂျော့ဂ်ျဝါရှင်တန် ဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှု အရ အသားစားရာကနေ သက်သတ်လွတ်အစာ စားလိုက်တဲ့အခါ...
သူနာပြုဆရာမက သစ္စာဖောက်သည့် ခင်ပွန်းလောင်းကို ဆေးထိုးသတ်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အသက် ၂၉နှစ် အရွယ် တရုတ်သူနာပြုဆရာမ၀မ်လင်းဟာ သတို့သားလောင်းကိုသတ်မှုနဲ့ ရှန်ဟိုင်းတရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ သူနာပြုဆရာမဟာ ၂၀၁၁တုန်းက သူရဲ့ချစ်သူနဲ့ ရှန်ဟိုင်း ဆဋ္ဌမမြောက်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ စတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်သူသက်တမ်း ၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။...
လိပ်ခေါင်းကို ပိုဆိုးစေနိုင်သည့် အစာများ
၊ လရိပ်မေ ၊ လိပ်ခေါင်းစဖြစ်နေချိန်နဲ့ လိပ်ခေါင်းကြောင့် နာကျင်နေချိန်တွေမှာ တချို့အစာတွေက လိပ်ခေါင်းရောင်ရမ်းမှုနဲ့ နာကျင်မှုကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ – ပြုပြင်ထားသော အစာများ တချို့အာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းအများစုပါတဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစာတွေက လိပ်ခေါင်းကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီပြုပြင်ထားတဲ့ အစာတွေထဲက ဓာတုပစ္စည်းအများစုဟာ...
ပါမောက္ခဦးအေးမွန်(ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ကလေးတွေမှာကော အူအတက်ရောင်တတ်ပါသလားဆရာ။ ဖြေ. အူအတက်ရောင်တာက အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးကနေ အသက်ရာကျော်အထိ အူအတက်ရောင်တာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အဖြစ်များဆုံးကတော့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အူအတက်ရောင်တာက အသက် ၁၀ နှစ်ကနေ ၃၀ နှစ်အရွယ်အထိ...
Page 334 of 440« First‹ Previous330331332333334335336337338Next ›Last »
ထမင်းစားနေရင်း မသီးဘဲနဲ့ မတော်မဆ နှာခေါင်းထဲရောက်နိုင်သလား . . .
ဇနီးကို ဆုံးရှုံးမှာစိုးသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် ၇၂ ပေါင် လျှော့ချခဲ့သူ
ရေမဆေးဘဲ သစ်သီးစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် အူလမ်းကြောင်းတွင်း ပိုးဝင်ခြင်းက အူမကြီးကင်ဆာဝေဒနာကို နှစ်နှစ်ကျော်ကြာ ဖုံးကွယ်စေ
ပျင်းရိသူတို့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့် အမြန်နည်း ၁၀
ခဏလေးပဲ . .
မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
သားအိမ်ရောင်တယ်ဆိုတာ . . .